Obama attends election night rally in Chicago - World News - SINA English
2012-11-08 02:57:40 GMT2012-11-08 10:57:40(Beijing Time) Xinhua English
U.S. President Barack Obama waves to his supporters at the election night rally in Chicago, the United States, on Nov. 7, 2012. U.S. President Barack Obama has beaten his Republican challenger Mitt Romney to win a second term at the White House, TV networks projected Tuesday. (Xinhua/Zhang Jun)
U.S. President Barack Obama (1st R) hugs Vice President Joe Biden at the election night rally in Chicago, the United States, on Nov. 7, 2012. U.S. President Barack Obama has beaten his Republican challenger Mitt Romney to win a second term at the White House, TV networks projected Tuesday. (Xinhua/Yang Lei)
U.S. President Barack Obama (2nd L) and Vice President Joe Biden (3rd L) together with their family wave to the crowd at the election night rally in Chicago, the United States, on Nov. 7, 2012. U.S. President Barack Obama has beaten his Republican challenger Mitt Romney to win a second term at the White House, TV networks projected Tuesday. (Xinhua/Yang Lei)
U.S. President Barack Obama (L) and Vice President Joe Biden acknowledge supporters at the election night rally in Chicago, the United States, on Nov. 7, 2012. U.S. President Barack Obama has beaten his Republican challenger Mitt Romney to win a second term at the White House, TV networks projected Tuesday. (Xinhua/Yang Lei)
Supporters of U.S. President Barack Obama attend the election night rally in Chicago, the United States, on Nov. 7, 2012. U.S. President Barack Obama has beaten his Republican challenger Mitt Romney to win a second term at the White House, TV networks projected Tuesday. (Xinhua/Zhang Jun)
U.S. President Barack Obama waved to his supporters at the election night rally in Chicago, the United States, on Nov. 7, 2012.
U.S. President Barack Obama has beaten his Republican challenger Mitt Romney to win a second term at the White House, TV networks projected Tuesday.